हिमानी शाहलाई च,कित पार्दै पूर्वयुवराज पारस शाहले यस्तोसम्म गरेपछि जताततै चर्चा, एकाएक तस्विर बन्यो भाइरल…हेर्नुहोस!
Published on: March 8, 2020
काठमाडौं । पूर्वयुवराज पारस शाह विभिन्न कामले चर्चामा आइरहन्छन् । उनको सामान्य गतिविधिले पनि सामाजिक सञ्जालमा ठूलो रुप लिने गर्छ । उनको पक्ष र विपक्षमा धेरै बहस हुने गर्छ । यस्तै शनिबार नयाँ हुलियामा देखिएका पारसको पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चुलिएको छ । यहाँ उनी सफाइ अभियन्ताका रुपमा देखिएका छन् ।
तस्वीर पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरको हो । शनिबार पशुपतिनाथ परिसरमा भेटिएका उनी लामो पछ्यौरा ओढेर झाडुले सफाइ गरिरहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । सिमसिम पानी परिरहेका बेला शनिबार गाडी चढेर उनी पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर पुगेका थिए । सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिरहेका केपी खनालको निम्तो स्वीकारेर पूर्वयुवराज शाह पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेको बताइएको छ ।
पूर्वयुवराज पारस शाहले सोनिकालाई यस्तो महँगो उपहार दिएपछि तात्यो सामाजिक संजाल केहि समय अगाडी सामाजिक संजालमा फोटो र भिडियोका कारण चर्चामा आएका पुर्वयुवराज पारस शाह र मोडल सोनिका रोकाया फेरी चर्चामा आएका छन् । निकै कम समयमा नजिक भएका पूर्वयुवराज पारस शाह र मोडल तथा सोनिका रोकायाको प्रेमसम्बन्ध रहेको चर्चा चल्ने गर्छ । तर, सोनिकाले भने पारससँग प्रेममा नभएको दा,बी गर्दै आएकी छिन् । यतिबेला भने मोडल सोनिकाले आफ्नो जन्मदिन मनाएको भिडियो युट्युबमार्फत शेयर गरेपछि फेरि एकपटक सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।
सोनिकाको जन्मदिनमा ‘स्पेशल गेस्ट’ बनेर पुगेका पारसले सोनिकालाई हार उपहार दिएका छन्, उक्त हार हिराको भएको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिएको छ । तर, सोनिकाले भने उक्त हार हिराको हो या के को हो भन्ने बताउन चाहिनन् । खबरहबको प्रश्नमा सोनिकाले भनिन्, ‘सबै सेतो देखिने हिरा नहुन पनि सक्छ, पारस सरकारले आफ्नो लेभलअनुसार गिफ्ट गर्नुभयो ।’
कतिपय मिडियाले ‘डलर’ कमाउने उद्देश्यले हिराको हार उपहार दिएको भन्दै समाचार बनाएको समेत उनले आ,रोप लगाइन् । ‘दिदीले पनि मलाई औंठी दिनुभएको थियो, तर त्यो कुरा किन मिडियामा आएन ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
जन्मदिनको कार्यक्रममा पुगेका पूर्वयुवराज पारसले सोनिकालाई चुम्बन गरेका थिए । यस्तै सोनिकाले पनि पारसलाई चुम्बन गरेको सोनिका आफैले अपलोड गरेको भिडियोमा देखिन्छ । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि सोनिका र पारसको निकटतालाई लिएर फेरि चर्चा हुन थालेको छ ।
त्यसो त सोनिका र पारस पछिल्लो समय धेरैपटक एकसाथ देखिएका छन् । उनको जन्मदिनमा अन्य केही कलाकारको पनि उपस्थिति थियो । जन्मदिनमा भावुक बनेकी सोनिकाले पत्रकारलाई भने बोलाएकी थिइनन् । उनले भनिन्, ‘पत्रकारले मेरो बारेमा नराम्रो मात्र लेख्छन्, डलर कमाउनका लागि त्यस्तै भिडियो बनाएर हाल्छन्, त्यसैले बोलाइनँ ।’
पूर्व युवराज पारस शाह सोनीकासँग नजिकिएपछि पत्नी हिमानी शाहले लेखिन यस्ता ५ भावुक स्टाटस
पूर्वयुवराज पारस शाह र समलिङ्गी मोडल सोनीका रोकायबीचको अफयर्स चलिरहेको खबरले यतिबेला चर्चा पाएको छ । पारससँग सङ्गत् बढेपछि सोनिकाले अ,श्लील ह,र्कतहरु पनि ब,न्द गरेकी छिन । सार्वजनिकरुपमै अ,श्लील तथा छाडा शब्दहरु बोल्ने र अर्धनग्न भएर हिड्ने जस्ता कार्यहरुले युटुबर समेत रहेकी सोनीका बेला बखत चर्चामा आउने गरेकी छिन । तिनै सोनीका पूर्व युवराज पारस शाहसँग एकदमै नजिक बनेकी छिन । यो कुरा उनी आफैले स्वीकार गरिसकेकी पनि छिन ।
पारस सोनीकासँग नजिकिएपछि हिमानीका लगातार भावुक फेसबुक स्टाटस
केहि समयअघि थाइल्याण्डकी एक युवतीसँगको सम्बन्ध बाहिरिएपछि पारसपत्नी हिमानी शाह दुखि बनेकी थिइन । अहिले पनि पारस सोनीकासँग नजिकिएपछि हिमानीले लगातार फेसबुकमा भावुक स्टाटस लेखेकी छिन । हिमानीले अक्टोबर ३० मा आफ्नो फेसबुक फ्यान पेजमा लेखेकी छिन् – ‘मान्छे चाहे जतिसुकै पढेलेखेको , धनी , आकर्षक अनि बुद्धिमान भएपनि यदी उ कुनै नारीको सम्मान गर्दैन भने उसको खुवीको काम छैन !! जय नेपाल’
त्यसपछि उनले मनभरी पि,डा भएपनि आफ्नो सन्तानको लागि मुस्कुराउने भगवानलाई आमा भनिन्छ भन्दै छोराछोरीसहितको तस्वीर पोस्ट गरेकी छिन । अलि ग,म्भीर मुद्रामा खिचिएको तस्वीर पोस्ट गर्दै नोभेम्बर १ मा उनले लेखेकी छैन, – ‘ज़िन्दगीमा के छ भन्दा पनि को छ ?? भन्ने कुराले अर्थ राख्छ !’ त्यस्तै नोभेम्बर २ मा उनले लेखेकी छिन् – ‘तब सम्म कमाउनुस जब सम्म “महङ्गो” चिज “सस्तो” लाग्दैन
चाहे त्यो “सामान” होस या “सम्मान” !!’
नोभेम्बर ३ मा अझै सेड मुडमा देखिएको हिमानीले घतलाग्दो स्टाटस लेख्दै भनेकी छिन्- ‘को पो छन र खुसी यहा?? कही कतै अपुरो सपनाले आशू टीलपिल गरेर, मुस्कुराउनै दिदैन !!’ त्यस्तै नोभेम्बर ५ मा उनले अर्क्जो स्टाटस लेख्दै छोडेर जानेहरुलाई झरीजाने रुखको पातको संज्ञा दिएकी छिन । उनले लेखेकी छिन- ‘यदि कोहि तपाईहरुको साथ छोडेर जान्छ !! भने जान दिनुस् किनकी रुखलाई छाडेर जाने पातहरु सधै कु,हिएर नै जान्छ !!’
बिहिबार मात्रै पनि उनले लेखेकी छिन – ‘ सुगन्धित फूलमा पनि किरा हुन सक्छ, चट्टानको भित्र पनि हिरा हुन सक्छ, सबैले भन्छन् म धेरै मुस्कुराउछु, तर मुस्कुराउने को ओठमा पनि चिरा हुन सक्छ ?’ उनको यो मार्मिक स्टाटसलाई धेरैले मन पराएर लाइक गरेका छन् । यसअघि बुधबार उनले अर्को स्टाटस लेखेकी छिन ।
‘लेख्नेले लेखेको कुरा पढ्नेवालाले, सम्झिदैनन् ” किनकी लेख्नेवाला भावना लेख्छ ” पढ्नेवालाले शब्द पढ्छन् !! जतिसुकै रमाइलो ठाउँ भएनि आफुलाई मन परेको मान्छे त्यहा छैन भने त्यो ठाउँ शुन्य नै लाग्दछ !! जन्म पछि बाँडिने मिठाई देखी सुरु हुन्छ जिन्दगीको यो खेल र श्राद्ध को खिरमा आएर, सकिन्छ यही नै जिन्दगीको मिठास हो !! प्रतिसोध लागी होइन प्रेमका लागी हो जिन्दगी त्यसैले सकारात्मक अनि असल कर्म गर्नु पर्दछ !!’
केही दिनयता पूर्वयुवराज पारस शाह र सोनिकाबीचको एउटा भिडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । पोखरामा खिचिएको भनिएको भिडियोमा पारस बाइकमा बसेका छन् । उनले देशमा कुनै वा,दी नभएको र आफूलाई राजवादी नभन्न भनेको भिडियोमा सुन्न सकिन्छ । यसो भनिरहँदा पारसको मोटरसाइकलको पछाडि सोनिका आएर बस्छिन् र पासरले बाइक हुइँकाउँछन् । यो भिडियो एकाएक भा,इरल भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा पारस ट्रोल भइरहेका छन् ।
पारस ट्रोलको शिकार बन्नुको पछाडि उनका यसअघिका ह,र्कत हुन् । उनी थाइल्याण्डमा रहँदा थाइ महिलासँग जो,डिएका थिए भने नेपालमा पनि उनका विभिन्न का,ण्डहरु सार्वजनिक भएका थिए । पछिल्लो च,रण सोनिकासँगको प्र,करण बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उनलाई ट्रोल गरिरहेका हुन् । सोनिकाले भने आफू र पारस तीन महिनादेखि नजिक रहेको प्रतिक्रिया स्वीकारेकी छिन् ।
सोनिकाले पारसलाई एक अभिभावकझैँ केयर गर्ने मिल्ने साथी भएको दा,बी गरेकी छिन् । सोनिकाले भनिन्, ‘पारस सरकारका कारण ममा चेन्ज धेरै आध्यात्मिक चेन्ज आएको छ, उहाँ मेरो मिल्ने साथी हो ।’ टिकटकमा पूर्वयुवराज पारस र सोनिकाको एक भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पारसको वि,रोध शुरु भएको थियो । सुमन नामक युवकले टिकटकमा १५ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।
यसैबीच पूर्व अधिराजकुमारी प्रे,रणा राज्यलक्ष्मी शाह (सिंह)ले दा,बी गर्दै आएको छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना घरजग्गा खालि गर्नका लागि नेपाल ट्रष्टसँग केही समय माग गरेकी छन् । शाहले प्रयोग र दा,बी गर्दै आएको सो घरजग्गा सर्वाेच्च अ,दालतले २४ माघमा नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको हुने अन्तिम फैसला सुनाएको थियो ।
त्यसपछि शाहले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई एक पत्र लेख्दै घरजग्गा खालि गर्न समय मा,ग गरेकी हुन् । सर्वाेच्च अ,दालतले अन्तिम फैसला सुनाएपछि उनले सो घरजग्गा छाड्नुपर्ने हुन्थ्यो । नछाडेको स्थितिमा सर्वाेच्च अ,दालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले बल प्रयोग गरेर भए पनि खालि गराउन सक्थ्यो । यद्यपी, फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म उनले छाउनीको सो घरजग्गामा बसोबास लम्ब्याउन सक्थिन् ।
तर, उनले फैसलाको पूर्णपाठ प्रतीक्षा नगरी खालि गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि केही समय दिन आ,ग्रह सहितको पत्राचार गरिन् । ‘उहाँ (प्रे,रणा) ले एक पत्रमार्फत् तत्काल घरजग्गा खाली गर्न नसक्ने बताउँदै केही समय दिन निवेदन दिनु भएको छ’, नेपाल ट्रष्टका सूचना अधिकारी सोभित रिजालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अ,दालतको फैसला आएपछि केही दिनमै उहाँले ट्रष्टका अध्यक्ष (उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल)लाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेख्नु भएको थियो ।’
रिजालका अनुसार, उनलाई कति समय समय दिने भन्ने विषयमा अब बस्ने बोर्ड बैठकले छलफल गरेर नि,र्णय गर्ने नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ । राजा वीरेन्द्र–ज्ञानेन्द्रकी फूपु स्वर्गीय विजया शाह (राजा त्रिभुवनकी अविवाहित कान्छी छोरी)ले उपभोग गर्दै आएको छाउनीको सो घरजग्गा शाही शासनकाल १० जेठ २०६२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रे,रणालाई दाइजो स्वरुप दिएका थिए । प्रे,रणाको त्यस अगावै राजबहादुर सिंहसँग विवाह भइसकेको थियो ।
त्यसअघि भीमसेन गुठी तथा बन्धन गुठीको नाममा रहेको सो घरजग्गा २ जेठ (०६२) मा ‘श्री ५ महाराजधिराज, नारायणहिटी राजदरवार’का नाममा ल्याइएको थियो । तर, गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले नेपाल ट्रष्ट स्थापना गरी राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टमा ल्याउने नि,र्णय ग¥यो । सोही नि,र्णय बमोजिम छाउनीको सो घरजग्गा पनि नेपाल ट्रष्ट मातहत ल्याउने नि,र्णय भयो ।
त्यसपछि ट्रष्टले प्रे,रणालाई सो घरजग्गा छाडिदिन आ,ग्रह गर्दै पत्राचार गर्यो । पत्राचारपछि मात्र आफूमाथि अन्याय भएको बताउँदै प्रे,रणाले स,र्वाेच्चमा मु,द्दा दर्ता गरिन् । स,र्वाेच्चले प्रे,रणाको पक्षमा फैसला सुनायो । सो फैसला उपर ट्रष्टले स,र्वाेच्चमा पुनरावलोकनको निवेदेन दियो । ट्रष्टको मा,ग बमोजिम तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इ,जलासले कानुन बमोजिम सो घरजग्गा ट्रष्टको हुने नि,र्णय सुनायो ।
आफू प्रतिकूल नि,र्णय आएपछि प्रे,रणा पनि सर्वाेच्च अ,दालत पुगिन् । तर, २४ माघ (०७६) मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको सम्बैधानिक इ,जलासले सो घरजग्गा ट्रष्टको हुने अन्तिम फैसला सुनाइदियो । स्मरणीय छ, प्रे,रणाको पक्षमा पहिलो फैसलापनि राणाकै इ,जलासले गरेको थियो ।
पहिलो फैसला प्रे,रणाकै पक्षमा भएकाले उनी त्यहाँ बस्ने भइहालिन् । तर, दोस्रो फैसला आफूवि,रुद्ध आएपछि फेरि सोवि,रुद्ध रिट दायर गरिन् । तेस्रो फैसला आफू प्रतिकूल भएपछि उनले सरकारसँग केही समय माग गर्दै घर सर्ने तयारी गरेकी हुन् ।
नेपाल ट्रष्टकी कानुन मा,मिला हेर्ने उपसचिव चमिला भट्टराईले पनि प्रे,रणाको तर्फबाट निवेदन आएको पुष्टि गरिन् । ‘उहाँ (प्रेरणा) लामो समयदेखि बस्दै आएको ठाउँ हो त्यो । जे भएपनि कानुन अनुसार ट्रष्टमै आउनुपर्नेे जग्गा ढिलो–चाँडो आउने परिस्थिति बनेको छ’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘ठाउँ खाली गर्न केही समय लाग्छ नै । त्यसैले, आवश्यकता अनुसार उहाँलाई समय दिन्छौँ । कति समय दिने भन्ने नि,र्णय चाहिँ अब बस्ने बोर्डको बैठकले गर्छ ।’